Iftiinka tabaruca ah: La-dagaalanka masiibada ee wejiyo badan - Cunnooyinka Taayirada
Iftiin iskaa wax u qabso ah: La dagaallanka aafada dhinacyo badan
Bill Breckle waa qofka ugu horeeya ee dad badani ku arkaan xaalad deg deg ah. Dadka kale, wuxuu noqon karaa qofka kaliya ee ay arkaan maalin la siiyo. Dab-damiye St Louis Park ganacsi ahaan, Bill sidoo kale wuxuu cunnada u siiyaa dadka u baahan hal mar ama laba jeer usbuucii Hopkins / St. Cashada Louis Park ee Albaabkaaga.
"Waqtiga aan ka maqnahay, weli waxaan jeclahay in aan caawiyo dadka," ayuu yidhi Bill. “Waxay i siinaysaa fursad aan ku hubiyo noocyada aan iyaga la joogo” xilli aysan la kulmin dhibaato.
Intii lagu gudajiray Faafida COVID-19, labadaba shaqooyinka Bill waxay qaateen macno cusub iyo caqabado. Isaga iyo asxaabtiisa jawaabeyaasha ugu horreeya waxay ku deeqayaan qalab ilaalin ah waxayna hirgelinayaan hab maamuusyo cusub oo si ammaan ah loogu caawiyo dadka laga yaabo inuu saameeyo fayraska.
Sida tabaruceyaasha Cunnada ee Wheels, macnaheedu waa inaad cuntada ku dhajiso albaabka oo aad ku taageerto masaafo aamin ah ka hor inta uusan helehu imaan albaabka. Sheekaysiga oo caado ka noqday dadka uu hadda u geeyo waa inay ka dhacaan meel fog.
Masaafada jireed ee udhaxeysa tabaruce iyo qaataha ayaa kordhay. Laakiin dad badan oo ku qaata Cunnada Wheels-ka halista sare ee dhibaatooyinka ee COVID-19, waxay ku tiirsan yihiin cunnooyinka la geeyo gurigooda in ka badan sidii hore.
“Waa mowjado badan oo leh 'Haye, sidee tahay xaalkaaga?'” Ayuu yidhi Bill. Wuxuu caadi ahaan weydiin lahaa inay jiraan wax uu ka caawin karo, sida bedelka nalka, laakiin hadda waa inuu si fudud u nastaa isagoo og inuu weli bixinayo raashin aad loogu baahan yahay iyo weji saaxiibtinimo.
Bill ayaa sheegay in aqoonta uu ka helay shaqadiisa ay ka caawineyso isku xirka dadka uu u gudbinayo adeegyada kale ee caawimaad ee uu ogyahay inay nolosha u fududeyn karto. "Isku xirnaanshahayga xarunta dab-damiska, waxaan dhihi karaa, haye, xoogaa waan ka walwalsanahay qofkaan ama labadan lammaane," waxaan heli karaa ilo caawin kara, ayuu yidhi.
Thanks to Bill iyo kumanaan kale oo mutadawiciin ah, Cunnada qaatayaasha Wheels waxay leeyihiin hal shay oo kayar oo laga walwalo waqtiyadan adag.
Waad ku taageeri kartaa shaqada dadka sida Bill ay qabanayaan inta lagu jiro dhibaatada COVID-19 adigoo ku deeqaya Cuntada Lugaha, u sameynta ama ku deeqida waji-gashiga mutadawiciinteenna ama isdiiwaangalinta si aad u noqoto tabaruce wicitaan.